INkosana uWilliam kunye noKate bathumele iNkosana uHarry kunye noMeghan sisipho soMntwana kuLili - Indumasi
Eyona Indumasi INkosana uWilliam kunye noKate Sele bathumele iNkosana uHarry kunye noMeghan kwisipho soMntwana uLili
INkosana uWilliam kunye noKate Sele bathumele iNkosana uHarry kunye noMeghan kwisipho soMntwana uLili
INkosana uWilliam kunye noKate Middleton sele bethumele usana uLili isipho.
NgeCawa, nge-6 kaJuni, iNkosana uHarry kunye noMeghan Markle uxele ngokufika komntwana wabo wesibini, intombi uLilibet Lili Diana . IiDuchess zaseSussex zizale ngoLwesihlanu, nge-4 kaJuni, kwaye ngoku ubuyele kwikhaya losapho lakwaMontecito nomntwana uLili.
Amalungu osapho lwasebukhosini ngaphesheya kwechibi avuya kakhulu lulongezo olutsha kusapho, kwaye bavuyisene noSussex ngokuzalwa komntwana oyintombazana. Emva kokuba iNkosana uWilliam noKate Middleton bazisiwe ngokuzalwa kukaLili, bakhawuleza bathumela iSussex encinci isipho, iingxelo Ngeveki .
Bhalisela iNcwadana yeRoyals yoMqwalaseli INkosana uHarry kunye noMeghan bonwabe kakhulu ngokongezwa okutsha kusapho lwabo.
Sisalinde ukuva malunga nantoni, ngokuchanekileyo, I-Duke kunye neDuchess yaseCambridge ithumele iNkosana uHarry kunye noMeghan ngentombazana yabo encinci, kodwa sisenzo esihle kakhulu.
Ngokuhambelana neminqweno yabucala kunye nosana olukhoyo, iNkosana uWilliam kunye noKate babelane ngesithombe esimnandi kwi-Instagram ka INkosana uHarry, uMeghan noVimba (ngumfanekiso owenziwa ngabakwaSussex xa uxele ukuba iiDuchess zikhulelwe umntwana wakhe wesibini ), kunye ne-caption, Sonke sonwabile ziindaba ezimnandi zokufika kosana uLili. Siyavuyisana noHarry, uMeghan noVimba. Ukumkanikazi, iNkosazana u-Eugenie kunye neNkosana uCharles kunye noCamilla Parker-Bowles nabo bonke bathumele amanqaku amnandi ngokufika kukaLili ngeeakhawunti zabo zemidiya yoluntu.
Iposi elabiwe nguDuke kunye neeDuchess zaseCambridge (@dukeandduchessofcambridge)
INkosana uHarry kunye noMeghan babiza uKumkanikazi uElizabeth, iNkosana uCharles kunye neNkosana uWilliam ngokuchanekileyo emva kokuzalwa kukaLili ngolwe-Sihlanu ukubaxelela ngeendaba ezimnandi, iingxelo Iphepha lesithandathu , kwaye usapho lonwabile nguSussex omncinci, ngubani Umzukulwana ka-Queen we-11 .
Iposti ekwabelwana ngayo yiRoyal Family (@theroyalfamily)
Nangona umntwana uLili engekadibani nosapho lwakhe ngaphesheya kwechibi okwangoku, sele ekwabelana ngento efanayo kunye nomzala wakhe, uPrincess Charlotte , njengoko babenjalo bobabini ebizwa ngegama lokumkanikazi uElizabeth kunye nexesha labo lokugqibela Utat'omkhulu, inkosazana uDiana . Igama elipheleleyo lePrince William kunye nentombi kaKate nguPrincess Charlotte Elizabeth Diana, ngelixa uLilibet ligama losapho likaKumkanikazi uElizabeth.
Njani i $ AP Rocky ivuselelwe i-90s yeFashoni
Kutheni le nto Inkqubo yamaQela mabini ingakhange yaphuke njengokuba usenokucinga
I-10 yeTV eVulekileyo ebonisa iiNgoma eziVulekileyo omele ukuziva ngoku
Phakathi kwemilinganiselo yokuDodobala, ngaba ukuCocwa kweFox Shannon Bream kuthathe indawo kaSean Hannity?
pirates bay umdlalo weetrone
nj ivoti yelungu lebhunga legesi
ibuya nini iintloni
nini ixesha elitsha lokungabi nazintloni kwi-netflix
Uqikelelo lweofisi yeenkwenkwezi zeenkwenkwezi
Ngaba uMika wayenokuphakamisa ubuso